Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad - Soosaarayaasha Alaabada Shiinaha
Bareesada In shabaggeedii steel
Shabaggeeda Steel Qaab gaar ah
Alxanka Alxanka shabaggeedii
Su'aalaha La Weydiiyo
2019 New Style Shiinaha FDA Bambooyin Goynta Board Bamboo ...
Mashiinka birta ah wuxuu qalab caalami ah ka qaatay shirkadda talyaaniga ah ee ORSOGRIL. Birta fidsan iyo birta laba jibbaaran ee qalloocan waxaa loo qaybiyaa waqtiyo cayiman. Alxanka iska caabinta-koronto-koronto-kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka koontaroolaya wuxuu ku cadaadiyaa birta laba jibbaaran ee birta ah si loo helo isku-xir alxam ah oo adag. Dusha sare ee guddiga waa mid fidsan oo ka kooban shabagyo bir ah oo leh xoog aad u sarreeya.
Si loo hubiyo badqabka badeecadaada, xirfadle, bey'adeed u roon, adeegyo baakado haboon oo hufan ayaa la bixin doonaa.
2019 New Style China FDA Bamboo Goynta Board Bamboo Gopping Board leh 4 PCS
Caqabada dhawaaqa ayaa inta badan ka kooban tiirarka qaab-dhismeedka birta ah iyo guddiga cod-nuugista iyo sanduuqa daboolka. Tiirka ayaa ah qaybta ugu weyn ee xoog ku qaadata xanibaada codka. Waxay kuxirantahay darbiga isku dhaca wadada ama saxanka birta ah ee gundhigga u ah wadada wadada boolal ama alxamid. Guddiga codka qaata waa qaybta ugu weyn ee maqalka-maqalka iyo nuugista codka, taas oo lagu hagaajiyay qaybta khaanadda H-qaabeeya oo ay ku dhejinayaan boodhadhka guga ee xoogga badan si ay u sameeyaan caqabad dhawaaq ah.
Haddii aad tahay shirkad bilow ah oo u baahan warshad farsameysan oo cusub ama gabal gaar ah oo qalabka wax lagu karsado ah… ABE
Shaxda FRP ma daboolaysa baahiyahaaga?
Maxay yihiin noocyada, qeexitaannada iyo si ...
Maxay yihiin faa'iidooyinka shabaggeedii birta ...
Cinwaanka: 50 mitir koonfur dhanka isgoyska Weier Road iyo Jingliu Road, Degmada Anping, Magaalada Hengshui, Gobolka Hebei
Talooyin Kulul, Alaabada Kulul, Khariidadda bogga